Illinois Adult vanoshandisa cannabis - Legalization yeMarijuana mu Illinois
Illinois Adult Use weCannabis Mutemo
Iyi ndiyo Chidimbu Chekushandisa Kwevakuru kubva kuJB Pritzker kubva muna Chivabvu, 2019. Izvo zvakave mutemo wakasiyana.
Kana iwe uchida Illinois disensary rezenisi - tinya apa.
Kana uchida a craft grow rezinesi mu Illinois - tinya apa.
Rini uye Neiko Illinois Pamutemo Adult Use Marijuana?
Kutanga muna Ndira 1, 2020, vanhu vakuru vanopfuura makore makumi maviri nemaviri vachakwanisa kutenga zviri pamutemo cannabis yekuzorodza yekushandisa kubva kune marezenisi emakontrakiti mudunhu reIllinois.
Kune yakazara 522 peji peji Click Here
Mari yekutumira mbanje:
Cannabis kutora haina kuganhurirwa, ingangoita efa imwe yedanda inogona kuve nemutemo nemugari wemu Illinois mugari - sezvo kupaza kuri kuwedzera uye kunoda kuwedzerwa pamwechete, kunze kwekunge imba ichikura.
30 magiramu mbanje maruva
5 magiramu cannabis kutarisana
500 mg yeTHC cannabis yakadzika zvigadzirwa; kana
5 zvidyarwa kune anokwanisa Illinois Vagari
hafu yemari yacho sevagari veI Illinois
hapana imba inokura kune vasiri vagari
Vakuru Shandisa Cannabis Haichinje Illinois Medical Marijuana
Illinois Marijuana Pamutemo Inosimudzira Kuenzana
The pamutemo kunyoresa cannabis mu Illinois inotsvaga kugadzirisa kusarongeka kwakare nekugadzira nevanopinda mumusika we cannabis we "vanowirirana pamutemo." Chirongwa chechikwereti chemadhora zviuru makumi maviri zvemadhora chakaderera, chichaendeswa neDhipatimendi Rekutengesa uye Hupfumi Mukana (DCEO) kune “vanonyorerana kodzero.”
Kwemagariro Kuenzanirana Mumunyori mu Illinois Cannabis Law
Mushandirapamwe muenzanisiro wechikwereti muvandi anogara muI Illinois anosangana neimwe yeanotevera maitiro:
Mukunyorera seinosvika makumi mashanu neshanu chikamu chemuridzi uye hutongi hwevanhu kana vashoma vakagara kwenguva isingasviki yemakore gumi apfuura mune imwe nzvimbo ine pesvedzero.
Mukunyorera aine anosvika makumi mashanu neshanu muzana muridzi uye masimba kune mumwe kana kupfuura vanhu vakasungwa, vakabatwa nemhosva, kana kutongerwa kuve wedare revacheche chero mhosva ipi neipi inokodzera kudzingwa pasi pemutemo uyu kana nhengo yemhuri yakakanganiswa.
Parizvino gara munzvimbo isina kurongeka; kana
Kusungwa, kutongerwa mhosva, kana kutongerwa kuve mudare redare redzimhosva nekuda kwechemo ipi neipi inokodzera kudzingwa pasi pemutemo uyu kana nhengo yemhuri yakakanganiswa.
Makumi maviri nemakumi maviri nemashanu mapoinzi e “vanyoreri vatsva” achave akavakirwa pa “Nzvimbo Yezvekuenzaniswa Kwemagariro.
Zvinyoreso Zvinyoreso kuIllinois Cannabis Market
Dhipatimendi rekurima rinokudziridza - nekutonga gadziriso - kuverenga kuti kuve nevanyoreri vatsva mushanduro yevakuru yekushandisa cannabis nzvimbo dzekudyara nyowani, makanzura uye varimisi vezvemhizha.
Zviyero zvinoenderana neruzivo kubva pamutemo, iri pane mazana mazana maviri nenhanho. Makumi makumi maviri nemashanu anomuka kubva kuSocial Equity Applicants, uye imwe gumi nembiri mabhonasi emakero kune vatsva ve cannabis vanonyorera vanogona kupihwa kune:
Mabasa nevashandi (2)
Chibvumirano cherunyararo (2)
Nharaunda yemunharaunda / mushumo wenharaunda (2)
Kurongeka kwezvakatipoteredza (2)
Illinois muridzi (2)
Chirongwa chekuita munharaunda (2)
Zvinogumira pane zveCannabis Bhizinesi Renezi muIllinois
Hapana munhu kana sangano rinobata chero mutemo wepamutemo, wakaenzana, kana unobatsira, zvakananga kana zvisina kunangana, weanopfuura matatu nzvimbo dzekudyara.
Hapana munhu kana sangano rinobata chero mutemo wepamutemo, wakaenzana, kana unobatsira, zvakananga kana zvisina kunangana, wemasangano anopfuura gumi anogovanisa.
Hakuna rezenisi rekuchekesa rinogona kupihwa munhu chero ripi zvaro kana chibvumirano chinodarika 10% kufarira munzvimbo yekurimaNo rezenisi rekutakura hukapihwa kupihwa munhu chero upi zvake kana sangano rine zvinopfuura gumi muzana kufarira munzvimbo yekurima.
Hapana munhu kana sangano rinobata chero zviri pamutemo, zvakaenzana, kuve muridzi, kana kubatsira zvinobatsira, zvakananga kana zvisina kunangana, zveanopfuura eodwa craft rezenisi pasi peichi chinyorwa.
Kugadzwa kwe "zveruzhinji kusaenzana chikumbiro" chinzvimbo marezinesi
Mumwe wezvekuenzaniswa kwemikana yekudyidzana ndeye mugari wemuI Illinois anosangana neimwe yeanotevera maitiro:
Mukunyorera uine anosvika makumi mashanu neshanu umiriri uye kutonga kune mumwe kana kupfuura vanhu vakagara kwenguva isingasviki yemakore gumi apfuura mune imwe nzvimbo ine pesvedzero.
Mukunyorera aine anosvika makumi mashanu neshanu muzana muridzi uye masimba kune mumwe kana kupfuura vanhu vakasungwa, vakabatwa nemhosva, kana kutongerwa kuve wedare revacheche chero mhosva ipi neipi inokodzera kudzingwa pasi pemutemo uyu kana nhengo yemhuri yakakanganiswa. ;
Kune vanoita zvekunyorera vane vashoma gumi evashandi venguva yakazara, munhu anonyorera aine angangoita makumi mashanu neshanu muzana evashandi varipo iye zvino:
Illinois vanhu vakuru shandisa pfupiso yemutemo mutsva we cannabis
Kunyorera kwevanopinda vatsva kuIllinois vakuru vanoshandisa cannabis soko
Kuverengera maitiro kune ma dispensaries. (Dhipatimendi rekurima richawedzera maitiro akafanana kuburikidza nehutongi hwekuita nzvimbo dzekudyara, processors, uye varimi vekugadzira hunyanzvi.) Mutemo uyu une muuyo wekutsvagisa IDFPR uchashandisa kuongorora mashandisirwo.
Pamapepa mazana maviri ezvipfumbamwe, makumi maviri neshanu madanho akasarudzirwa vanyoreri vanokodzera se "vanowanika mukana mune dzepamhepo."
IDFPR inogona kupa mabhonasi anosvika gumi nemaviri emafomu ekunyorera sarudzo, asi zvisiri kudikanwa, chirongwa. Mabhonasi mapepa anozopihwa chete mune chiitiko kuti dhipatimendi rinowana huwandu hukuru hwekushandisa hunosangana nehuwandu hushoma hwepfungwa dzinodiwa.
Fee wa wavers
Dhipatimendi reMari uye Nyanzvi Mutemo uye Dhipatimendi rekurima richabvisa makumi mashanu muzana emari chero isingabhadharwe rezenisi rezvikwereti (kusvika kuma50 application) uye chero isingabhadharwe mari inoenderana nekutenga rezenisi rekushandisa bhizinesi re cannabis. marezinesi maviri) kana veruzhinji verunyararo vanosangana nemamwe mamiriro.
Kuderedza kumusoro-kumberi mutengo weNew Dispensing License
Vanyoreri vanogashira iyo inokwenenzverwa kugovera rezenisi rezvesangano vanofanirwa kuve nemazuva makumi mapfumbamwe kubva pazuva rekupihwa mubairo wekutarisa nzvimbo yepasipo yekutumira sangano rekutengesa vatengesi apo vatsva vanopinda vanobvumidzwa mumusika. Izvi zvinoderedza mitengo inobatanidzwa nekupinda mumaindasitiri.
Kubvumidza EQUity mu ILLINOIS KUTI UNOGONESA UCHENJERI UYE KUTI UYE KUDYA
Iyi inotevera nzira yakagadzirirwa kuve nechokwadi chakaringana misika munyika.
Kutanga kubvumidzwa kwevakuru kushandisa rezenisi ikozvino yezvokurapa cannabis rezinesi varidzi
Nguva yekupa marezinesi
Varimi vekurapa cannabis vanogona kunyorera rezinesi mukati memazuva makumi matanhatu kubva pazuva rinoshanda reMutemo.
Marezinesi anozopihwa kune vanokodzera kunyorera mukati memazuva makumi mana.
Medical cannabis disensaries vanogona kunyorera rezinesi mukati memazuva makumi matanhatu kubva pazuva rinoshanda reMutemo.
Kutengeswa kwekushandiswa kwevakuru cannabis kuchatanga muna Ndira 1, 2020.
Aya masangano anogona kunyorera chechipiri rezinesi pane imwe nzvimbo nyowani pasi pematanho akafanana.
Kubhadhara marezenisi kubhadhara marezenisi ekushandisa
Mari yekusabhadhara isiri kudzoserwa: madhora zviuru zana
Cannabis bhizinesi rekuvandudza bhizinesi mari: 5% yekutengesa izere pakati paChikunguru 1, 2018 kusvika Chikunguru 1, 2019 kana madhora mazana mashanu, chero ipi shoma.
Cannabis bhizinesi rekuvandudza bhizinesi mari: 3% yekutengesa izere pakati paChikunguru 1, 2018 kusvika Chikunguru 1, 2019 kana madhora mazana mashanu, chero ipi shoma.
Iyo isingabhadharwe mvumo yemvumo: 30,000
Cannabis bhizinesi rekuvandudza bhizinesi mari: $ 200,000
Vatsva vanopinda kune mukuru anoshandisa cannabis musika
Varimi vane hunyanzvi
Nheyo yeNew Illinois Cannabis Bhizinesi Kuwedzera
Dhipatimendi reMari uye Nyanzvi Mutemo
Chivabvu 1, 2020: Sangano rinopa mubayiro marezinesi anosvika makumi manomwe neshanu
Chikunguru 1, 2020: Sangano rinopa mibairo inosvika makumi mana emvumo yevagadziri, kusvika pamakumi mana emarezinesi evanokurira hunyanzvi, uye marezinesi ekutakura masangano
Zvita 21, 2021: Sangano rinopa mibairo inosvika zana rezinesi kumasangano matsva ekugovera
Zvita 21, 2021: Sangano racho rinopa marezinesi anosvika makumi matanhatu evarimi vekugadzira hunyanzvi, kusvika pamakumi matanhatu marezinesi evagadziri, nemvumo yekutakura masangano.
Kubhadhara marezenisi mutengo wevanopinda mutsva kuIllinois cannabis soko
Asiri kudzoserwa mari yekunyorera madhora zviuru zvishanu
License yekubhadhara madhora zviuru makumi mana
KUSVIRA PAKUNAMATA KWAKAITWA PENYAYA YEMHONDI PAMUSORO
Rondedzero iyi yaizotanga chirongwa chitsva chekupa rubatsiro, chirongwa cheKudzorera Nzvimbo Dzivanhu (ROC), yekudyara munharaunda dzakatambura zvakanyanya nekuda kwemitemo yekusarura zvinodhaka.
ROC chirongwa chekutarisa
ICJIA ichadoma "ROC Nzvimbo" kana nzvimbo dzichaita kuti vanyoreri vakwanise kunyorera mari yenyika kuburikidza neROC Board.
Iyo ROC Bhodhi ichave nenhengo dzinopfuura makumi maviri uye ichasarudzwa naGavhuna, kana mudiwa wake, uye Gweta Guru, kana mudiwa wake.
Iyo ROC Bhodhi inovandudza chikumbiro chekushandisa, kukumbira maficha kubva kune anokodzera ROC Nzvimbo, kugovera rubatsiro kune dzese nyika, uye kuongorora nekuongorora zvirongwa zve ROC.
Iyo ROC Bhodhi inopa mushumo wegore negore kuHofisi yaGavhuna nezvefambisirwo yayo.
KUSIMBISA UNOGONESA UNOGONESA MU ILLINOIS
Izvi zvinotevera kumira-kwega mhosva dzinokodzera kukwidziridzwa.
Chikamu 4 Kutora (hazvibvumirwe nemunhu chero upi zvake kuti ave necannabis mumari inotevera)
a. <10g Mutemo wehurumende
Anogona kupihwa muyedzo uye mhosva dzinodzingwa §10 (a)
b. 10-30g Kirasi B Misdemeanor
c. 30-100g Kirasi A Misdemeanor
d. 100-500g Kirasi 4 Felony 1-3 makore
Chikamu 5 Mugadziri / Anunura
(zvisiri pamutemo kumunhu chero upi zvake achiziva kugadzira, kuburitsa, kana kuve nechinangwa chekuendesa kana kugadzira cannabis mune inotevera mari
a. <2.5g Kirasi B Misdemeanor
b. 2.5-10g Kirasi A Misdemeanor
c. 10-30g Kirasi 4 Felony
Chikamu 8 Zvirimwa (zvisiri pamutemo kumunhu chero upi zvake achiziva kugadzira kana kuva ne cannabis sativa chirimwa kunze kwekunge chakabvumirwa nekuda kwekutsvaga)
a. <5 zvidyarwa Kirasi A Misdemeanor
b. 5-20 zvirimwa Kirasi 4 Felony
Maitiro ekuparadzwa kweI Illinois Cannabis Mhosva
Kurudziro iyi inomisa chirongwa chekukurumidza kupamhidzira zvinyorwa zvevapari vevanhu vakasungwa, vane mhosva, pakutariswa, kana kuferefetwa misdemeanor kana Class 4 felony kutyorwa kweCannabis Control Act. Zvinangwa zvepakutanga zvechikamu ichi ndezve (1) kudzikisa zvinyorwa zvine chekuita nezve cannabis, uye (2) kururamisa maitiro.
Iyo ye otomatiki yakawedzera maitiro inoda zvinotevera:
Dhipatimendi reMapurisa eHurumende rinofanirwa kuona vanhu vese vane zvinyorwa zvekupara mhosva izvo zvavanokodzera kuti vadzime uye vadzore zviitiko zvekutyorwa kudiki mukati memakore maviri kubva musi unoshanda weMutemo.
Mukati mamazuva zana negumi nemusi wekubudirira kwechiitiko ichi, Dhipatimendi reMapurisa reNyika rinofanirwa kuzivisa (a) mahofisi emuchuchisi ane mhosva yekuparadza mhosva, (b) mauto emunharaunda ematare, uye (c) hofisi yeInterior Attorney General ichizivisa vanhu vese. nekutyorwa kudiki uko kwakakodzera kufeterwa.
Mukati memazuva zana nemakumi maviri negumi gamuchirwa chiziviso kubva kubazi reNyika Mapurisa, mahofisi eGweta eUnited States anofanirwa kuendesa ratidziro kudare vachitsvaga kupomedzerwa vanhu vane mhosva dzakakodzera. Hofisi yeGweta Gurukota rinogona kutumira kodhi yakatsanangurwa kana Gweta reHurumende harina.
Mumazuva zana nemakumi manonwe mushure mekugamuchira gwaro rakatemerwa, dare richaongorora zvakatemerwa odha uye inodonhedza kudzikiswa kwedare uye zvinyorwa zvemitemo kunze kwekunge ichitarisa kuti mhosva yacho haichazive tsananguro yekutyorwa kudiki.
Dare rinopa makopi eodhisheni kuDhipatimendi reMapurisa eHurumende, komisheni inosunga, masangano anomirira mhosva dzakakodzera, uye munhu ane nhoroondo yakadzingwa.
Maitiro ekuparadza otomatiki haashande kune vanhu vane misdemeanor kana Class 4 felony kutyorwa uko kwakaperekedzwa nemhosva dzisiri mhosva yekukanganisa. Vanhu vane marekodhi iwayo, uye vamwe vanhu mune mamwe mamiriro ezvinhu, vanogona kukumbira parutivi dare kuti marekodhi avo apedzwe.
KUSHANDISA MITEMO YINOGONESA UNOGONESA UNOGONA KUTI ILLINOIS
Hapana chiri muchiratidzo chinorambidza vashandirwi kutora mitemo inoshanda yekuita nezve kuputa, kushandisa, kuchengetedza kana kushandisa cannabis munzvimbo yebasa.
Hapana chero chinhu chiri muchiridzwa chinorambidza vashandirwi kuranga mushandi kana kumisa basa pamushandi nekuda kwekutyora mutemo webasa wevashandirwi kana mutemo webasa.
KUDZIVA KWAAADULT KUSHANDISA CanNABIS mu ILLINOIS
Mitero yese inoiswa mune imwe Cannabis Regulation Fund
Cultivation rhafu mutero
7% yemari yakawandisa kubva pakutengeswa kwe cannabis nemurimi, wehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, kana processor kusangano rinogovanisa.
Iyo cannabis mutengi yemutero:
10% yemutengo wekutenga - Cannabis ine THC level pane kana pazasi 35%
20% yemutengo wekutenga - All cannabis infosed zvigadzirwa
25% yemutengo wekutenga - Cannabis ine THC mwero pamusoro 35%
Iyi mitero ichave ichiwedzera kune mamwe mabasa, mukana, kana mutero unobvisirwa neHurumende yeIllinois kana nechero masangano emapurisa kana kukanzurwa kwezvematongerwo enyika.
Mutengi wedunhu anotengesa mutero:
Mizinda inogona kuita kuti mutengi aratidze mutero unosvika 3% mukuwedzera kwe0.25%
Counties inogona kuita mutengi kuvhura mutero inosvika 0.5% munzvimbo dzakabatanidzwa mukuwedzera kwe
Nzvimbo dzisina kufambisirwa dzinogona kutora mutero weutengi unosvika ku3.5% mukuwedzera kwe0.25%
KUDZVANYA KWENYAYA DZAKAKUKURUKURUKA KUTI ISANGANE NECHEMA
Iyo Dhipatimendi Revenue inopa iyo yakakosha FY20 mari yekufungidzira mumazuva anotevera.
Mari yemutero ichaiswa muCannabis Regulation Fund itsva
Masangano ehurumende ane basa rekutungamira chirongwa chevakuru chekushandisa cannabis vanozowana zviwanikwa zvekuvhara mutengo wekutonga kubva kumitero yaunganidzwa nechirongwa ichi.
Mari yese yasara ichagoverwa zvinotevera.
35% ichaendeswa kuGeneral Revenue Fund,
25% ichaendeswa kuKudzorera Nharaunda Yedu Nharaunda kuti iwanikwezve munharaunda,
20% ichaendeswa kune homwe inotsigira hutano hwepfungwa uye zvinodhaka zvinodhaka
kumadhipatimendi ehutano emunharaunda,
10% ichaendeswa kune Budget Stabilization Fund kubhadhara mari yekubhadhara mari isati yabhadharwa.
8% ichaendeswa kuI Illinois Mutemo Yekudzidzisa Kudzidzisa uye Mireza Bhodhi kuti vagadzire mutemo wekupa mvumo chirongwa
2% ichaendeswa kuDhaka Rokurapa Kurapwa Fund kuti ifundise veruzhinji kudzidza uye kuziva.
HURUMENDE YEMISLANIS UNOGONA MITEMO
Gavhuna achasarudza Cannabis Regulation Oversight Officer anozoiswa muIDFPR. Uyu munhu, pamwe neboka rake, achave nemvumo yekuita zvakatemerwa nekuremekedzwa ekurumbidza maererano nechirongwa chekushandisa kwevanhu vakuru. Uyu munhu anozobatawo kuedza pakati pemasangano ehurumende akabatanidzwa mukugadzirisa uye kubhadhara mutero kutengeswa kwe cannabis muIllinois.
Inotakura mutoro wekumanikidza uye kuunganidza mutero unobatanidzwa nekutengesa kwe cannabis.
Ine mutoro wekupa marezenisi nekutarisira nzvimbo dzekudyara, varimi vezvipenga, vanoita masangano, uye vanofambisa masangano.
Inotarisana nekupa mvumo kwema laboratori ayo anoedza cannabis
Inotarisirwa rezinesi uye pamusoro pemasangano anogovera.
Illinois State Mapurisa
Inotarisirwa kuitisa kumashure kutarisa kune wese akabatanidzwa mune iyo mvumo ye cannabis chikamu.
Ine mutoro wekutarisazve hurongwa hwechengetedzo kune ese masangano ane marezinesi.
Ine mutoro wekuongorora zvese nhoroondo yematsotsi rekodhi ruzivo uye kuzivisa vanhu vese vane zvidiki kudzvinyirirwa vanokodzera kukurumidza otomatiki.
Dhipatimendi reHutano hweHuzhinji
Inotakura basa rekuvandudza kuraira kwakakomberedzwa nehutano hwekunyevera uye kufambisa iyo Adult Use Cannabis Public Health Advisory Committee.
Dhipatimendi reCommerce uye Ehupfumi Mukana
Inotarisirwa kuitisa chirongwa chechikwereti, chirongwa chekupa rubatsiro, uye rubatsiro rwehunyanzvi kune vanoita zvehunyanzvi hwekuenzanisa.
Inotakura mhaka yekupa mazano kune Adult Use Cannabis Public Health Advisory Committee zvine chekuita nemishonga nekudzivirira.
Inotakura basa rekugadzira uye kuparadzira zvinhu zvekudzidzisa zvevatengi.
Inotakura basa rekugadzira nzvimbo dze ROC mudunhu rese iro rinogona kunyorera kuti riwane mari kubva ku ROC bhodhi kuti riwanikwezve munharaunda.
HWEMPENYU HWEMPENYU NOKUDZIVA KWAI ILLINOIS CanNABIS
Makumi maviri muzana emari yakawanikwa nekutengesa kwevakuru vanoshandisa cannabis ichatsigira kuedza kugadzirisa zvinodhaka uye hutano hwepfungwa.
Kushambadzira Zvirambidzo zveCannabis Bhizinesi
Hapana bhizinesi re cannabis rinogona kuiswa kana kuchengetedza, kana kukonzera kuiswa kana kuchengetwa, kushambadzira, kwe cannabis kana chigadzirwa chinotapurwa nechero cannabis chero mune chero chimiro kana kuburikidza neyaka svikiro:
Pakati pegumi nemamirimita ematanho eparutivi penzvimbo yechikoro, nzvimbo yekutamba, chipatara, nzvimbo yekuchengetedza hutano, nzvimbo yekutandarira kana nzvimbo, nzvimbo yekuchengetedza vana, paki yeruzhinji kana raibhurari yeruzhinji, kana chero mutambo wekunamatira urwo rusingatenderwe kune wemunhu makore makumi maviri nemasere kana kupfuura;
Mumotokari kana mune motokari yeruzhinji yekufambisa kana yekufambisa yeruzhinji;
Imba kana mune yeyakachengetedzwa neveruzhinji kana yeruzhinji inoshandiswa.
Iyo ine ruzivo rwenhema kana kusatsausa, inokurudzira kushandiswa kwakawandisa, inoratidza munhu ari pasi pemakore makumi maviri nemasere anodya cannabis, inosanganisira mufananidzo weiyi cannabis shizha; kana
Inosanganisira chero chifananidzo chakagadzirwa kana kuti chinogona kufadza vana, kusanganisira Katuni, matoyi, mhuka, kana vana, kana chero chimwe mufananidzo wemifananidzo, mavara, kana mitsara inonyanya kufarirwa kushambadza kuvana, kana chero kutevedzera kwekuisa pipi kana kunyora, kana iyo inosimudzira kunwa kwe cannabis.
Izvi zvinotadzisa hazvishande kune zvisiri zvekutengesa meseji.
Illinois Cannabis Packaging zvinodiwa
Yambiro inotevera inoshanda kune ese ma cannabis zvigadzirwa: "Ichi chigadzirwa chine cannabis uye chinoitirwa kushandiswa nevanhu vakuru makumi maviri nevapfuura. Kushandiswa kwayo kunogona kukanganisa kukanganisa uye kungave kuri kuita tsika. Ichi chigadzirwa hachifanirwe kushandiswa nevakadzi vane pamuviri kana vanoyamwisa. Hazvibvumidzwe kutengesa kana kupa chinhu ichi kune chero munhu, uye zvingangotakurwa kunze kwenyika yeIllinois. Hazvibvumirwi nomutemo kushandisa mota uchiri pasi pesimba re cannabis. Kuripa kana kushandiswa kwechigadzirwa ichi kunogona kutakura zvirango zvakakosha zvepamutemo mune dzimwe nzvimbo uye pasi pemutemo wehurumende. "
Yese inokohwa cannabis yakagadzirirwa kugoverwa kune cannabis bhizinesi inofanira kuiswa mumudziyo wakasungwa, wakanyorwa.
Kuiswa kwechero chero chigadzirwa chine cannabis kuchave kuri kushivirira vana uye kusapindirana neyakaenzana nemitero iripo, kusanganisira yeVatengi Chigadzirwa Chengetedzo miganho yakatemerwa nePoison Prevention Act.
Chitaurwa chechero cannabis chigadzirwa chichava, pakati pezvimwe zvinhu, "kushandiswa ne" zuva pane chinyorwa, huwandu hwe cannabis iri mune chigadzirwa, uye zvinyorwa zvemukati.
Zvese zvigadzirwa zve cannabis zvinofanirwa kunge zvine zvirevo zvekunyevera zvakagadziriswa kune vatengi, zvehukuru kuti zvive zvakajeka uye zvichioneka nyore kune mutengi anoongorora pakeji, iyo inogona kunge isina kuvharwa kana kuvanzika munzira ipi neipi.
Packaging haafanire kuve neruzivo rwekuti:
Inhema kana kuti inotsausa;
Inosimudzira kunwa kwakawandisa;
Inoratidza munhu ari pasi pemakore makumi maviri nemaviri anodya cannabis;
Inosanganisira chero chifananidzo chakagadzirwa kana kuti chinogona kufadza vana, kusanganisira Katuni, matoyi, mhuka, kana vana, kana chero chakafanana nemifananidzo, mavara, kana mitsara inonyanya kufarirwa kushambadza kuvana, kana chero chinhu chakapetwa kana chakanyorwa chakafanana chero zvigadzirwa zviripo kuti zvidyirwe sedhiramu inowanikwa mune yekutengeserana, kana inokurudzira kushandiswa kwe cannabis;
Inosanganisira chero chisimbiso, mureza, crest, jasi remaoko, kana zvimwe zvisaririra zvingangotsausa mutengi kuti vatende kuti chigadzirwa chakabvumidzwa, chakagadzirwa kana kushandiswa neNyika yeIllinois.
DZIMBA KUKURA YEKUNOGONA MUILLINOIS
Illinois dzimba dzinotenderwa kukura kusvika kune mashanu cannabis zvidyarwa pasi pemamwe mamiriro:
Unokura munhu mukuru ane makore makumi maviri nemasere kana kupfuura,
Murimi ari mumhuri ine imba yekugara kana mvumo kubva kuna iye muridzi,
Iye murimi anogumira pakukura zvishanu kana zvishoma zvirimwa,
Iye anorega anofanirwa kuchengetedza cannabis mune yakasarudzika yakakiyiwa kamuri kure nenhengo dzeimba dziri pasi pe21, uye
Iye unosakura unorambidzwa kukura cannabis pamberi peveruzhinji.
DZESVONDO DZESVONDO DZEMADZISI DZINOSHANDISA UNOGONA MU ILLINOIS
Vanamatunhu vanogona kupa zvisungo zvinorambidza kuiswa kwemakanzuru mumatunhu avo.
Mapazi emunharaunda ehurumende anofanirwa kutora zvisarudzo mukati megore rimwe regwatidziro remutemo kana ivo vari mashoma kugamuchira 'kubuda' zvigadzirwa kuburikidza nereferendamu yemunharaunda.
Vanamatunhu vanogona kuita zvirango zvakanangana nenzvimbo dzekurima dzakabvumirwa, varimi vekugadzira basa, vanoita masangano
Ndichakuona munguva pfupi - nekukurumidza kana iwe uchinyoresa.